Ilitye lokwenziwa. Umntu wenza i-opal. Uhlaziyo olutsha 2021 -Ividiyo emnandi
Izithuba zazo zonke iintlobo ziye zadityaniswa ngokwentando nakwezorhwebo.
I-synthetic opal okanye ilebhu yenze intsingiselo ye-opal
Umntu wenza i-opal. Ilitye leSlocum
Ngaba iilebhu zenziwe nge-opals zibalulekile
Ungazi njani ukuba ii-opals ezingezizo ezokwenyani ziyinyani?
Ngaba i-opal emnyama yokwenziwa yomelele?
Ukufunyanwa kobume bendawo e-odolo ye-opal exabisekileyo kukhokelele kudibaniso lwayo ngu-Pierre Gilson ngo-1974. opal yemvelo ngokwesiqhelo.
Ngaphantsi kokukhulisa, imibala yombala iyabonakala kulusu lwecikilishe okanye kwipateni yocingo lwenkukhu. Ngapha koko, ii-opal zokwenziwa azenzi fluoresce phantsi kokukhanya kwe-ultraviolet. I-Synthetics nayo ngokubanzi iphantsi koxinano. Kwaye zihlala zinoburharha kakhulu.
Uninzi lwama-synthetics, nangona kunjalo, luchanekileyo ngokuchanekileyo lubizwa ngokuba yi-optical imal. Ziqulethe izinto ezingabonakaliyo opal yemvelo. Ezifana ne-plastic stabilizers. Ukulinganisa okubonakalayo kwiigrafu zokuvuna. Zihlala ziphosa iglasi. Kwakhona ilitye elisezantsi le-slocum. Okanye emva kwezinto zeplastiki.
Ipatheni yolwaluko lwekholam kwi-opera ye-Gilson ukulinganisa (i-opal synthetiki)
Olunye uphando olwenziwe kwiinkampani ezincinci luye lwavelisa izinto ezinqunyiwe. Unempahla efana neyobugcisa. Kwaye sele isetyenziswe kwiziqholo.
Ilitye le-Slocum, ngamanye amaxesha lithengiswa njenge-slocum opal yinto yokuqala ye-opal simulant. Yayithandwa ngokufutshane ngaphambi kokungeniswa kwe-synthetics. Kunye nezifaniso ezingabizi kakhulu. Yiglasi ye-silicate ebonisa umkhondo we-sodium, kunye ne-magnesium, ialuminiyam kunye neetanium.
Singayifumana ngemibala emininzi. Amacwecwe amancinci kakhulu kwifilimu yesinyithi enza i-opalescence yokufakelwa. Uqikelelo lwee-nanometer ezingama-30 ubukhulu, ngohlobo lweeflakes eziguqukayo. Ivelisa umphumo ophazamisayo wefilimu. Ezi flakes ngokwazo ziboleka umbala, kunye nombala ngaphakathi kwesiseko seglasi.
Amagwebu kunye nokujikeleza okuqhelekileyo kweglasi zezinye izinto eziqhelekileyo. Sinokuyibona phantsi kokuphakamisa. Kwimizekelo yamva nje, yakhiwe ulweliso ziyabonakala xa ujongwa ecaleni.
I-Opalite ligama lezorhwebo elenziwe ngumntu ngeglasi kodwa liyadida njengoko ikwaligama lohlobo opal yemvelo. Kwaye ezahlukeneyo opal simulants. Amanye amagama ale mveliso yeglasi ibandakanya iargenon, ikwayinto entle yolwandle, ilitye lenyanga elihonjisiweyo kunye namanye amagama afanayo. Isetyenziselwa ukukhuthaza iintlobo ezingcolileyo ze-opal eqhelekileyo.
Njengamanye amatye obuxoki. Ayinaxabiso
Uninzi lwee-opal ezizinzileyo ezinesitenxo kule ndawo, ezigobileyo okanye ezinamaqhuma ngenxa yokwakheka kwendalo. Ngelixa ilitye elenziwe ngumntu liya kuba licaba ngokugqibeleleyo kuba la macandelo mabini athajiwe ukuze ancanyathiselwe ndawonye. Lumka ngakumbi ukuba i-opal isetiwe kubucwebe kwaye awunakubona umva wayo okanye icala.
I-opal yokwenziwa ayinamandla kune-opal yendalo, nangona i-opal eyenziweyo iguquguqukayo kwaye, eneneni ithambile ukusika kune-Opal yendalo. Ubungakanani bokuqina kwe-Opal imalunga ne-6.5 kwinqanaba le-gemstone yamatye. Yomelele kancinci kuneglasi. Ngokuqinisekileyo ihlala ixesha elide kune-Emerald, kwaye inzima kuneeperile.
I-opal yendalo iyathengiswa kwivenkile yethu yegem
Senza ubucwebe be-opal ngokwesiko njengamakhonkco okuzibandakanya, iintsimbi zomqala, amacici e-stud, izacholo, namacici Qhagamshelana nathi ngesicatshulwa.
I-Cantera opal 10.77 ct
Iball opal 6.05 ct
Isibini esivulekileyo 4.60 ct
Iball opal 4.03 ct
Iball opal 4.79 ct
I-Cantera opal 7.53 ct